စျေးပေါသောနှစ်ဆ Hopper အရေအတွက်မြေသြဇာထုပ်ပိုးစက်ပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ။ | YiZheng
နှစ်ဆ Hopper အရေအတွက်ပမာဏထုပ်ပိုးစက်ကဘာလဲ။
The နှစ်ဆ Hopper အရေအတွက်အရေအတွက်ထုပ်ပိုးစက် ကောက်ပဲသီးနှံ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဓာတ်မြေသြဇာ၊ ဓာတုဗေဒနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်သင့်လျော်သောအလေးချိန်ထားသောထုပ်ပိုးစက်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ granular ဓာတ်မြေသြဇာ၊ ပြောင်းဖူး၊ ဆန်၊ ဂျုံနှင့် granular မျိုးစေ့များ၊ ဆေးဝါးများစသည်တို့ကိုထုပ်ပိုးသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များအရအထုပ်အပိုး၏အလေးချိန်မှာ ၅ ကီလိုဂရမ်မှ ၈၀ ကီလိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ အသားဖြည့်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းစကေးစက်သည်အဓိကအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းလေးမျိုးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် - အလိုအလျှောက်ချိန်ခွင်၊ ၎င်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ လှပသောအသွင်အပြင်၊ တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှု၊ အလိုအလျောက်အမှားလျော်ကြေးပေးခြင်းနှင့်အမှားပြင်ဆင်ခြင်းကိုရရှိရန်အဓိကအင်ဂျင်သည်ကြိမ်နှုန်းနှစ်မျိုးရှိသောလိမ်မောင်းနှင်ခြင်း၊ ဆလင်ဒါနှစ်ခုတိုင်းတာခြင်း၊ အဆင့်မြင့်သောဒစ်ဂျစ်တယ်အကြိမ်ရေပြောင်းလဲခြင်းထိန်းချုပ်သည့်နည်းပညာ၊ နမူနာထုတ်ယူခြင်းနည်းပညာနှင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုတားဆီးခြင်းနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။
သင့်ဝယ်လိုအားအနေဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သောစက်ပစ္စည်း - ကာဗွန်သံမဏိ၊ သံမဏိအပြည့်အဝ ၃၀၄ / ၃၁၆ လီ (သို့) ကုန်ကြမ်းအဆက်အသွယ်အစိတ်အပိုင်းများသည်သံမဏိဖြစ်သည်။
Double Hopper အရေအတွက်အရေအတွက်ထုပ်ပိုးစက်၏အင်္ဂါရပ်များ
1. ထုပ်ပိုးခြင်းသတ်မှတ်ချက်များကိုချိန်ညှိနိုင်သည်, အလုပ်လုပ်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုအောက်မှာစစ်ဆင်ရေးအတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။
2. ပစ္စည်းများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်သံမဏိ ၃၀၄ ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
စုစုပေါင်းအထုပ်အလေးချိန်နှင့်အိတ်အရေအတွက်စုဆောင်းထားသော display ကို 3.The ။
4. အထူးဒီဇိုင်းကျွေးမွေးခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း၊ တစ်ပြိုင်နက်တည်းအိတ်နှင့်ချခြင်း။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ချိန်၏သုံးပုံတစ်ပုံကိုသက်သာစေသည်။ အမြန်နှုန်းသည်မြန်ပြီးထုပ်ပိုးမှုတိကျမှုသည်မြင့်မားသည်။
တင်သွင်းသည့်အာရုံခံကိရိယာများ၊ တင်သွင်းထားသောအအေးခံကိရိယာ၊ တိုင်းတာမှု၏တိကျမှုသည်နှစ်ထောင်၏အပေါင်းသို့မဟုတ်အနှုတ်ဖြစ်သည်။
စားပွဲပေါ်သို့တက်။ အနိမ့်ကျစေနိုင်သောပို့ဆောင်အပ်ချုပ်စက်ဖြင့်အရေအတွက်အမျိုးမျိုးသောတိကျမှုမြင့်မားခြင်း၊ စက်တစ်မျိုးသည်ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးရှိပြီးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်။
နှစ်ဆ Hopper အရေအတွက်ပမာဏထုပ်ပိုးစက်ဗီဒီယိုပြသမှု
နှစ်ဆ Hopper အရေအတွက်အရေအတွက်ထုပ်ပိုးစက်မော်ဒယ်ရွေးချယ်ရေး
-10 ~ 40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
အပ်ချုပ်စက်၊ အလိုအလျောက်ရေတွက်ခြင်း၊ အနီအောက်ရောင်ခြည်ချည်ခြင်း၊ အစွန်းဖယ်ထုတ်စက်၊ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရသင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည် အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာလှည့်လည် Polishing စက်